TTSweet: သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ၁၉ နိုဝင်ဘာ တစ်နေ့တာနှင့် ကျွန်တော့်အမြင်
Posted by T T Sweet at 2:17 PM
Thandar Lwin November 23, 2012 at 2:38 PM
ကျမ တို့ လို လူပြိန်းများ နားလည်အောင် ရှင်းလင်းစွာရေးပြပေးသော ဦးမောင်ခြိမ့် အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဦးမောင်ခြိမ့် ၊ တီတီ ဆွိ နှင့် ဂျူးဂျူးလေး တို့ မိသားစု ကျမ်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ရှင် ။
ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဆိုးဝါးချိန်မှ ဆိုးသည်ဟု အတိုက်အခံပြောသကဲ့သို့ ကောင်းချိန်မှာ ကောင်းလာသည်ဟု ချီးကျုးရန်လဲ လိုအပ်သည်ဟု ထင်ပါသည်။
Right, Bravo UChaint :)
NSA November 23, 2012 at 7:17 PM
ချီးကျူးသင့်ချိန် ချီးကျူးရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ထောက်ခံပါတယ်။
Yes, It is right. Now, Myanmar needs unity and we all should have positive attitude.
As for RIT student, I am very proud of you.
But, very disappointed for Paw Gyi (Aung Naing Moe, EC 96)
လသာည November 23, 2012 at 7:58 PM
တကယ့်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ တင်ပြသွားတာ တအားရှင်းတဲ့အတွက် တကယ့်ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။ အစ်ကိုကြီး ဦးမောင်ခြိမ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mrs. Bagel November 24, 2012 at 9:55 AM
San San Htun November 24, 2012 at 3:40 PM
ဦးမောင်ခြိမ့် ဆောင်းပါးဖတ်ရတ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း လင်းသွားပါပေတယ်..Bravo ..!
Natthamee November 24, 2012 at 10:12 PM
စံပယျဖွူ November 24, 2012 at 11:35 PM
၀င်လည်ရင်းကြုံလို့ ဖတ်ချင်တာလေးတွေ ဆတ်လိုက်ရတာ ကျေးဇူးပါနော်။
ကျွန်တော်တို့ လမ်းတွေ အများကြီး လျှောက်ရပါအုန်းမည်။ ကြိုးစားမှုတွေ ဒီထက် ပိုလုပ်ရပါအုန်းမည်။ ကြိုးစားမှုများကို ရပ်တန့်မသွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အနှောက်အယှက်မပေးမိအောင် ကြိူးစားရပါမည်။ Agree with U Chaint :)
လောဘဖြင့် ရယူသော လာဘ်စားမှုမျိုးကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အဓိက တိုက်ထုတ်ရပါမည်။ စားဝတ်နေရေး လိုအပ်ချက်ကြောင့် ရယူခြင်းထက် လောဘကြောင့် ရယူသော လာဘ်စားမှုသည် တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အင်မတန် နစ်နာစေကာ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း နာမည်ပျက်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လာဘ်စားမှုမျိုး ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကြပါစို့။
ကြိုးစားမှုများကို ရပ်တန့်မသွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အနှောက်အယှက်မပေးမိအောင် ကြိူးစားရပါမည်။.....:)
I also agree with this view..
လောဘဇောတိုက်နေသော လက်တဆုတ်စာ ကချင်ခေါင်းဆောင်များ၊ နောက်ကွယ်က ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းမှု မရှိအောင် နိုင်ငံတကာ စာမျက်နှာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို မျက်နှာပျက်အောင် ဖန်တီးနေသော တရုတ်၏ ကချင်လက်တဆုတ်စာ လူများကို သွေးထိုးနေသည်ဟု မြင်မိပါသည်
မြသွေးနီ November 30, 2012 at 5:34 PM
အချက်ကျကျ သုံးသပ်ပြသွားတာ သဘောကျတယ်။
သဘောထားကြီးရမှာကို သိထားပေမယ့် ကြေးနီတောင်ကိစ္စလိုမျိုး သူတို့ကိုင်တွယ်ပုံကို မြင်ရပြန်တော့ ဒေါသအတော်ထွက်ရပြန်တယ်။
ဦးခြိမ့်စာရေးကောင်းပါတယ်။ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကနေ ရှုမြင်ပြီး
After seeing recent crashdown in Monya, all my impression on U Thein Sein were gone completely. Do not regret whoever like him later on. Cheer!